हैदरावादको विजय यात्रामा दिल्ली बन्न सक्ला तगारो ? दुवै टिमको सम्भावित-११ – WicketNepal
हैदरावादको विजय यात्रामा दिल्ली बन्न सक्ला तगारो ? दुवै टिमको सम्भावित-११
WicketNepal Staff, २०७७ कार्तिक २३, आईतवार ११:०७
हैदरावादले इलिमीनेटरमा शुक्रबार रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरको यात्रा समाप्त गर्दै क्वालीफायरमा दिल्लीसंगको भेट पक्का गरेको थियो। दिल्लीले पहिलो क्वालीफायरमा मुम्बईसंग पराजित भएपछि फाइनल पुग्ने दोश्रो मौका पाएको हो। दिल्ली हालसम्म आईपीएलको फाइनल प्रवेश गर्न सकेको छैन भने हैदरावादले यस अघि २ पटक फाइनल खेलीसकेको छ। आज हैदरावादलाई पराजित गर्न सके दिल्लीले पहिलो पटक फाइनल यात्रा गर्नेछ।
प्रदर्शन उत्कृस्ट रहेता पनि टिमको ब्याटिंग क्रम भने मजबुत देखिदैन। जेसंन होल्डरले राम्रो प्रदर्शन गरेता पनि मध्यक्रममा धेरै भरपर्दा ब्याट्सम्यानहरु छैनन्। रिद्दिमान शाह नखेल्दा ब्याटिंग अझ कमजोर देखिएको छ जसको झल्को बैंगलोरसंगको खेलमा पनि देखिएको थियो। टिममा छैठौं बलरको कमि पनि देखिन्छ। कुनै एक बलरले नराम्रो प्रदर्शन गरेमा त्यसलाई भरपाई गर्नसकेन बलरको कमि देखिन्छ। हैदरावादको यो कमजोरीमा दिल्लीले प्रहार गर्न सक्छ या सक्दैन हेर्न लायक हुनेछ।
हैदरावाद शानदार लयमा छ जसले पछिल्लो ४ खेलमा लगातार जित दर्ता गरेको छ
इन्जुरी अपडेट : घाइते भएका कारण इलिमीनेटर खेल्न नसकेका हैदरावादका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान रिद्दिमान साहा खेल्ने नखेल्ने निश्चित छैन। अलराउण्डर विजय शंकर पनि ह्याम्सट्रिन्ग इन्जुरीका कारण उपलब्ध हुनेछैनन्।
पछिल्लो भेट : हैदरावादले दुवै भेटमा दिल्लीलाई सहजै पराजित गरेको थियो। अबुधाबीको पहिलो भेटमा वार्नर, बेयरस्टो र विलियमसनको इनिंग मद्दतले हैदरावादले १६२/४ को योगफल तयार गरेको थियो। राशिद खानले १४ रन खर्चेर ३ विकेट लिंदा दिल्लीले १५ रनको हार बेहोरेको थियो।
दोश्रो भेटमा हैदरावादले जित्ने पर्ने खेलमा दिल्लीलाई ८८ रनले पराजित गरेको थियो। रिद्दीमान साहा ( ८७ ) र डेभिड वार्नर ( ६६ ) ले उत्कृस्ट ब्याटिंग गर्दा टिमले २१९/२ को विशाल योगफल तयार गरेक थियो। जवाफमा दिल्लीले १३१ रन मात्र बनाउन सकेको थियो। राशिद खानले मात्र ७ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए।
दिल्ली क्यापिटल्स : शिखर धवन, अजिंक्य रहाने, श्रेयस ऐयर ( कप्तान ) , शिमरन हेटमायर, रिशभ पन्त ( विकेटकिपर ) , मार्कस स्टोइनिस, हर्षल पटेल, अक्षर पटेल, कागीसो रबाडा, रभीचन्द्रन आश्विन, एनरिक नोर्किया
सनराइजर्स हैदरावाद : डेभिड वार्नर ( कप्तान ) , श्रिभत्स गोस्वामी ( विकेटकिपर ) , मनिष पाण्डे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, जेसन होल्डर , अब्दुल समद, राशिद खान, शाहबाज नदीम, सन्दिप शर्मा, टि नटराजन
– दिल्ली हालसम्म आईपीएलको फाइनल पुग्न सकेको छैन। हैदरावाद २०१६ र २०१८ मा फाइनल पुगेको थियो जसमध्ये २०१६ मा बैंगलोरलाई फाइनलमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो।
– अबु धाबी मैदानमा दोश्रो ब्याटिंग गर्ने टिमले ९ मध्ये ८ खेल जितेको छ
– अन्तिम ८ इनिंगमा पृथ्वी शले मात्र ४९ रन बनाएका छन् जुन क्रममा ३ पटक शून्यमा आउट भएका छन्। सिजनमा १३ खेलमा उनले ८ पटक दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेका छैनन्
– यो सिजन १०० बल भन्दा बढी बल खेल्ने ब्याट्सम्यानमा ग्लेन म्याक्सवेल ( १०१.८८ ) पछि अजिंके रहाने ( १०७.७६ ) र रिशभ पन्त ( १०९.६१ ) को सबैभन्दा कम स्ट्राइक रेट रहेको छ
– डेभिड वार्नरले अन्तिम ६ आईपीएल सिजनमा ५०० भन्दा बढी रन बनाएका छन्। सबै सिजनमा उनले ४० भन्दा बढी औशत र १३५ भन्दा बढीको स्ट्राइक रेटले रन बनाएका छन्
– दिल्लीले ७ प्लेअफ/नकआउट मध्ये ६ खेलमा हार बेहोरेको छ। दिल्लीको एक मात्र जित गत वर्ष हैदरावाद बिरुद्ध इलिमीनेटरमा रहेको थियो जतिबेला दिल्ली २ विकेटले विजयी भएको थियो
कप्तान आजमको उत्कृष्ट पारीमा पाकिस्तानको सहज जित